Keeniyaan weerara Covid-19 deebi'ee dabalaa jiru qolachuuf uggura cimaa labsite - NuuralHudaa
Keeniyaan weerara Covid-19 deebi’ee dabalaa jiru qolachuuf uggura cimaa labsite
Prezdantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa lakkoofsi namoota Covid-19 qabaman daran dabalaa jiraatuu ibsuun, weerara kana qolachuuf jecha, kaawuntiiwwan (godinoota) shan keessatti imalli godhamu ugguramuu labse. Haaluma kanaan Magaalaa guddoo Naayiroobii dabalatee Kaawunitiiwwan shanan keessatti, lafaanis tahee qilleensarraan galuu fi bahuunis dhorkameera.
Prezdaant Uhuuruun ibsa kenneen Bulchiinsota Naayiroobii, Kaajiyaadoo, Kiyaambuu, Maachaakos fi Naakuruun “zooniiwwan dhukkubaan faalaman’’ jechuun labse.
Uggura imalaatiin alattis walgahiiwwan qaamaan gaggeeffaman kaawuntiiwwan kanneen keessatti dhorkamanii jiru.
Imalli idiladdunyaarraa gara biyyattiitti godhamu garuu, akkuma kanaan duraa namoota ragaa qorannoo Covid-19 irraa bilisa jedhu dhiyeeffataniif qofa kan hayyamamu tahuu ibsame.
Kana malees pireezidantichi galgala keessaa sa’aa 2:00 irraa eegalee hanga barii sa’aa 10:00tti namuu akka hin sochoone jechuun labse. Dhugaatiin alkoolii manneen hoteelaa keessatti akka hin gurguramne kan dhorgame yoo tahu, manneen nyaataas fuudhanii deemuu malee namoota achitti akka hin keessummeessine ajajaman.
Keeniyaatti namoonni Vaayirasichaan qabaman Amajjii hanga ji’a BItooteessaa keessatti %2 irraa %20tti ol guddatuu beeksiste. Uhuruun akka jedhetti, yeroo ammaa biyyattii keessatti yoo xiqqaate namoonni torba guyyaatti sababa vaayirasichaatiin du’aa jiran. Naayiroobitti ammoo namoota qorataman 10 keessaa jaha vaayirasichi irratti argama.
Uggurri labsame kunis guyyaa har’aa (Jimaata) halkan keessaa eegalee hojiirra oola.
Gama biraatiin ammoo Keeniyaan talaallii Covid-19 lammiilee biyyatti gannaa 58 ol tahaniif kennaa kan jirtu yoo tahu, Prezdaant Uhuuruu fi haati warraa guyyaa har’aa taalaallii kana fudhatanii jiran.
August 4, 2021 sa;aa 11:54 am Update tahe